Umthandazo wenceba Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ngesi sihlandlo, sifuna ukukuzisa umthandazo wenceba, ukuze siyicelele iNkosi uThixo wethu el mundo iphelele. Ukusizisela uxolo lwengqondo kunye nokomoya, ukugxotha zonke izinto ezimbi, ukugcwalisa iintliziyo zabo bonke abantu ngothando olukhulu nangokulunga.
1 Yintoni iNceba?
2 Izicatshulwa zeBhayibhile kwinceba kaThixo
2.1 Duteronomi 4: 31
2.3 I-86 Psalms: 5
3 Yintoni imisebenzi yeNceba?
3.1 Imisebenzi yoBumbano yeNceba
3.2 Imisebenzi yeNceba yoMoya
4 Umthandazo Wenceba
4.1 Umyalezo kaYesu
4.2 Umthandazo wokuvula
Inceba yaziwa njengokwazi ukuva novelwano ngabantu abaphilayo, kunye nokuxhasa abo benzakeleyo. Eli gama linentsingiselo elandelayo kwisiLatini; "I-Miseri" ithetha "Usizi, isidingo"; "Intambo" ithetha "Intliziyo" kwaye okokugqibela, "Ia" ibonisa ukuba "Ngakubantu".
Inceba inokubonakaliswa ngeendlela ezininzi, ngeendlela ezibonakalayo, ezinjengokubonelela ngendawo yokuhlala, ukutya, ukusela, ukunxiba abangenamakhaya, phakathi kwabanye. Kwaye ngeendlela zokomoya, ezinje ngokufundisa, ukunika iingcebiso ezilungileyo kunye nokuthuthuzela abo baziva bengenabomi, ukuxhasa abantu abanesithukuthezi nabonwabileyo, ukubathandazela nokubacela impilo-ntle yabo
Izicatshulwa zeBhayibhile kwinceba kaThixo
Kweli candelo lebhlog yethu, sifuna ukukuzisela iikowuteshini ezahlukileyo zebhayibhile ezinxulumene neNceba kaThixo wethu uSomandla, njengendlela yommiselo wabantu, izithembiso, iimfundiso kunye nokubonakalisa.
Duteronomi 4: 31
«Ngenxa yokuba uNdikhoyo uThixo wakho nguThixo onothando nenceba. Akayi kukushiya, okanye akutshabalalise, kwaye akasoze asilibale isifungo sakhe kubazali bakhe sokuba angabashiyi abo bamdinga kakhulu ».
Wathi uDavide kuGadi, Ndididekile kunene. Masiwele ezandleni zeNkosi, ngokuba ininzi inceba yakhe; Andiyi kuwela ezandleni zabantu.
I-86 Psalms: 5
Ngokuba ulungile uThixo, uxolela; unenceba kwabo banibizayo.
«Wasisindisa kwaye kungengenxa yomsebenzi olungileyo esiwenzileyo, kodwa ngenxa yokulunga kwakhe okukhulu. Ukuvuselelwa kunye nokuhlaziywa komphefumlo, ngokuhlanjululwa koMoya oyiNgcwele.
Imisebenzi yeNceba zonke ezo zinto sinokuzenza kubamelwane bethu, ezisisondeza kuThixo wethu yonke imihla. Zimbini iintlobo zemisebenzi yeNceba, eyahlulwe ngale ndlela yicawe, yimibutho yabasebenzi kunye neyasemoyeni.
Imisebenzi yoBumbano yeNceba
Singatsho ukuba imisebenzi yenceba yezo zenzo zezo zifuna impilo yabanye. Phakathi kwabo unokufumana ezi zichazwe ngezantsi:
Sela abantu abanxaniweyo.
Uphahla apho abahambi ngezonwaba banokuhlala khona.
Ilokhwe ehamba ze.
Imisebenzi yeNceba yoMoya
Singatsho ukuba imisebenzi yeNceba yoMoya zonke ezo zizenzo eziza kunceda abanye, ngakumbi kwiimfuno zabo zokomoya kunye nezomzimba. Phakathi kwazo kukho oku kulandelayo:
Lungisa abo benza iimpazamo.
Xolela abo basonayo.
Ingcebiso elungileyo kwabo bafuna uncedo.
Fundisa abo bangaziyo.
Thandazela abaphilayo nabafileyo.
Thuthuzela nabani na okhathazekileyo.
Lo ngumthandazo omhle wobabalo lukaYesu ukucela inceba yakhe kunye nehlabathi liphela. Ungathandaza naye yonke imihla, ngakumbi ngokuhlwa.
Kutheni ubhidekile kwaye unxunguphele ziingxaki zobomi? Makhe ndikhathalele yonke into onayo, yonke into iya kuba luncedo kuwe. Ngokwendlela endiyilo ngayo, xa unikezela, kunye nam yonke into iya kuzola. Musa ukuphelelwa lithemba, musa ukuthandaza uphelelwe lithemba, ngokungathi ufuna ukubuza ukuba umnqweno wakho uzalisekiswe. Endaweni yoko, phumla amehlo omphefumlo wakho kwaye ngokuzolileyo undixelele:
Zama ukungazihoyi izimvo eziphazamisayo ngokuqonda okwenzekayo kuwe. Awufuni kutshabalalisa icebo lam, ufuna ukuseta iminqweno yakho. Makhe ndibe nguThixo kwaye sihambe ngokukhululekileyo. Zinikezele kum ngokuzithemba. Phumla kum ugcine ikamva lakho ezandleni zam. Ndixelele rhoqo:
Owona monakalo mkhulu unokuzibangela wona kukuzama ukuqiqa, kunye neengcinga zakho, ukuba umnqweno wokufuna ukusombulula ingxaki ngendlela yakho awukuncedi nganto. Xa undixelela:
Sukuba njengesigulana esicela ugqirha ukuba akuphilise, kodwa sikunike iingcebiso zendlela yokwenza. Ukuphulukana nokwamkelwa kwam okungcwele, musa ukoyika. Ndiyakuthanda… Ukuba ucinga ukuba ngaphandle kwemithandazo yakho, imeko iya isiba mandundu okanye iyenziwa nkulu, qhubeka uthembele, vala amehlo akho kwaye uthembele kum nakuwe. Qhubeka undixelela:
Ndidinga izandla zam ukuze ndikwazi ukushukuma. Sukundishiya ndilahlekile. USathana ufuna kuphela: ukucaphukisa kwaye akususe uxolo Kholelwe nje kum, phumla phezu kwam, zinikezele kum, isenzo sokunikezela enyanisweni sele ingummangaliso, kwaye kholwa kum. Ndithembe, ke ungakhathazeki, lahlela zonke iintlungu kude kum kwaye ulale lula. Soloko undixelela:
Mane ubuze uphinde uphinde ngokholo, uyakubona ukuba uya kuvuzwa.
Phambi kokuqala kubalulekile ukuba uqale ngalo mthandazo:
«Yesu, Nkosi yam noMkhululi: Ndiyaguquka kuzo zonke izono endizenzileyo unanamhla, kwaye ndibeke intliziyo yam nomphefumlo wam kuwe, kuba ndikhubekise uThixo olungileyo ngazo. Ndiyazibophelela ukuba andisayi kuphinda ndone kwakhona, ndiyakholelwa ukuba ngenceba yakho engapheliyo uya kundivumela ukuba ndixolele izono zam kwaye undikhokelele kubomi obungunaphakade. Amen.
Nkosi, ngelizwi lakho usixelele: «Intliziyo ethobekileyo, uThixo akasoze ayidele; elona dini libalaseleyo yintliziyo eguqukayo kwizono zayo. Ke ngoko, sifuna ukucela uxolo kuzo zonke iimpazamo zethu kunye neempazamo zethu, ngamazwi esiwafundisiweyo.
Inceba siyakucela Nkosi, sonile. Ngemfesane yakho engapheliyo, uxolele zonke iimpazamo zethu, sonile kuwe kwaye kuwe kuphela. Senze ububi kwaye uyayithiya loo nto. Nceda ususe izono zethu kunye netyala ezahlukeneyo, uhlambulule iintliziyo zethu, ucoce iingqondo zethu kwaye usincede siqhubeke nendlela yakho.
Funda kwakhona i umthandazo wozuko.